HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်ကြောင့် Haydarpasa ရထားဘူတာမြေမှရောင်း
ကြောင့် haydarpasa ရောင်းချ Gary မြေယာ
CHP Yarkadaş Haydarpasa ရထားဘူတာနာမကိုအောက်တွင်သားကောင်နှစ်စဉ်ထောက်ပံ့ကြေး "ဒီ application ကိုရပ်တန့်က" ဖျောပြည် "လူငယ်အနုပညာဇုန်" ချိတ်ဆက်ခေါ်ဆိုမှုကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနပိုင်Yarkadaş "Haydarpasa ရထားဘူတာကိုပိုမိုနှစ်စဉ်ထောက်ပံ့ကြေးလက်၏ဧရိယာတက်ဖွင့်လှစ်။ ဤသည်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဧရိယာပွညျ၌ 15 ရက်ပေါင်းရွှေ့ပြောင်းခံရဖို့ကိုမေးမြန်းလျက်ရှိသည် "ဟု၎င်းကပြောသည်။
400 ။ သူတို့ကတစ်ဦးကအပတ်တွေ့ဆုံ
OdaTV'' သတင်းအဆိုအရ; "အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ Haydarpasa ရထားဘူတာ, 400 များရောင်းချမှုကိုရပ်တန့်နိုင်ဖို့အတွက်အတူတကွလာပါ။ ကြိမ်တီထွင်မှု။ အမှန်တကယ် "400 များ၏ရှေ့မှောက်၌ Haydarpasa ရထားဘူတာ။ စတင်လက်ထောက် Filiz Kerestecioğlu Oya Ersoy အပတ်နေ့စွဲ "Kadir Gökmen CHP ဟောင်းတဦးလွှတ်တော်အမတ်များငြိမ်းချမ်းရေးYarkadaşလညျးမိမိထောက်ခံမှုပေးခဲ့တယ်ဟောပြောကြ၏။ သမိုင်းရဲ့အထောက်အထား Haydarpasa ရထားဘူတာ၏ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် serdil Kadıköyမြို့တော်ဝန်ကိုလည်းအဖြစ်အပျက်, Dara Odabaşıတက်ရောက်ခဲ့ပြီး re-start အဆိုပါရထားဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။
NEW အိမ်ငှား FIELD
အရေးယူအတွက်စာရွက်စာတမ်းမျှဝေအချိန်အားဖြင့်လိုက်ပါသွားရိုးရာသီချင်းများနှင့်ရိုးရာကခုန်ထို့နောက် CHP 26 လူမှုမီဒီယာအကောင့်။ ကာလလက်ထောက်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုYarkadaş "ကျနော်တို့Haydarpaşaရထားဘူတာကိုကယ်တင်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်, အာဏာရ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုငှားရမ်းဖို့ဘူတာရုံဖွင့်လှစ်" ဟု၎င်းကပြောသည်။
Yarkadaş wrote: "ကျနော်တို့က '' Haydarpasa ရထားဘူတာရှိနိုင်သငျသညျ" ဟုသူကဆက်ဆံ, Kadikoy ကောင်တီရွေးကောက်ပွဲဘုတ်အဖွဲ့လည်း TCDD ကိုအသုံးပြုမယ့်မြေယာကိုပိုမို AKP Kadikoy မြို့တော်ဝန်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းမူတည် - ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးတိကျတဲ့Özkanနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနမှတဆင့်အနေနဲ့အေဂျင်စီကျော်လှည့်။ ဒါဟာ 15 ရက်အတွင်းဆေးရုံကဆင်းခံရဖို့လိုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင်ဤတစ်ကာကွယ်ထားဧရိယာသည် ... ဤလျှောက်လွှာကိုအကောင်အထည်ဖော်သည့် Haydarpasa ၏သမာဓိနှောင့်အယှက်ရန်။ လုံလောက်အောင်လုံလောက်ပါတယ်, ... အရွက် Haydarpasa Haydarpasa အဆင်ပြေမထိမခိုက် .. "
အတိအကျ Ozkan ရက်အနည်းငယ်အကြာခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးအဆောက်အဦးကျင်လည်ကျက်ကြောင်းညွှန်ပြခြင်းနှင့်ပြည် protected ဧရိယာYarkadaşအဖြစ်ကြေငြာခဲ့ပါတယ် "15 ရက်ပေါင်းယိုစီးမှု၌ဤဧရိယာနှင့်သူတို့လူငယ် Art Center အမည်အောက်တွင်နှစ်စဉ်ထောက်ပံ့ကြေးဖွင့်ချင်" ဟု၎င်းကပြောသည်။
Haydarpasa မီးရထားဘူတာပေါ့ဆမီးအောက်မှာတို့သည် လာ. | Haydarpasa ရထားဘူတာ 10 / 11 / 2012 အဆိုပါHaydarpaşaရထားဘူတာမီးပေါ့ဆမှု၌လက်ဝဲမှအရည်အချင်းမရှိတဲ့အလုပ်သမား၏လက်မှ gar ပြုပြင်သည်ထင်ရှားသောသမိုင်းဝင် Haydarpasa ရထားဘူတာပြာ၌မီးပေါ်မှာအမှု၏ပထမဦးဆုံးကြားပထမဦးဆုံးဒီဂရီသမိုင်းဝင်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများ၏အိမ်ခေါင်မိုးမှာမီးထဲကပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ Kadikoy 1 ။ Ihsan နှစ်နှစ်အတွက်အောက်တရားရုံးİfort subcontracting ကုမ္ပဏီအတွင်းပထမဆုံးကြားနာပြီးနောက်ရေနံ၏ပိုင်ရှင်နှင့်အခြားလုပ်သားများအောင်ပွဲခံဟူစိန်Kaboğluမီးနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ သူကကုမ္ပဏီအဖြစ်အပျက်၏ Ihsan Kaboğluနေ့ကမင်္ဂလာဆောင်ဖြစ်ပါသည်မလုပ်ပဲတရားစွဲဆိုပြီးလျှင်၏စွဲချက်အပေါ်ထောင်၌တစ်နှစ်မှသမိုင်းဝင်ရထားထမှာမီး-ခံနိုင်ရည် insulator တွင်လည်းပစ္စည်းများနှင့်အတွေ့အကြုံရှိလုပ်သားများကိုအသုံးပြုရန်ဟုဆိုသည်။ စွပ်စွဲခံရသူအလုပ်သမားအောင်ပွဲခံမီးသတ် ...
အနောက်ဘက်တစ်မြေမြန်နှုန်းရထားဘူတာကျန်ရှိသော၏ Alanya စည်ပင်သာယာသုသာန်ထဲမှာချထားပါ။ 14 / 03 / 2012 Alanya မြူနီစီပယ်ညီလာခံမနေ့ကခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ ယင်းမြို့တော်ဝန် Hasan Sipahioğluမြန်နှုန်းမီးရထားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကိုတုံ့ပြန်ရန်, "သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးန်ကြီးဌာနဤကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ. အတွက်တင်ဒါခေါ်ယူထားတော်မူပြီ။ လေလံကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပြီးကျနော်တို့ Alanya အတွက်မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားအတူတက်ရောက်ရလိမ့်မည်ပြု၏။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုရပ်တန့်ဖို့အရပျကိုပြသချင်တယ်။ ကျနော်တို့ကိုလည်းမြန်နှုန်းမြင့်ရထားမှတ်တိုင်အဖြစ်စည်ပင်သာယာသုသာန်ရာပြည်အနောက်ဘက်ကြိုတင်ယူထားပါ "ဟုသူကဆိုသည်။ အဆိုပါတူရကီ-Eskisehir အချိန်ရဲ့အစမှာမြန်နှုန်းမြင့်ရထားများတူရကီရဲ့လေးဆယ်နှစ်အိပ်မက်, ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ Anatolia xnumx't ဖို့မြို့ '' အစာရှောင်ခြင်း '' Alanya အတွက်များစွာသောဖို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉ် add ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ရထားလမ်းကွန်ယက်၏ယခုနှစ် 2023 11 တထောင်ကီလိုမီတာကာလအတွင်းနှစ်ဆမှာရည်မှန်း ...
Haydarpasa ရထားဘူတာပြန်လည်ထူထောင်ရေးစတင် 10 / 12 / 2015 Haydarpasa ရထားဘူတာပြန်လည်ထူထောင်ရေးစတင်: ခလုတ်ကိုHaydarpaşaရထားဘူတာအဘို့အဖိခံခဲ့ရလူနေအိမ်ကောလာဟလ၏ပွနျလညျထူထောငျနှောင့်နှေးသောဟိုတယ်, ။ Kadıköyမြူနီစီပယ်ပွနျလညျထူထောငျအတှကျအခွင့်ပြုချက်ကိုပေး၏။ အဆိုပါHaydarpaşaရထားဘူတာများအတွက်ပွနျလညျထူထောငျလုပ်ငန်းစဉ်၏အစအဦးအနေဖြင့်အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့သမိုင်းဝင်ဆိုဒ်များ။ က output CJ မြူနီစီပယ်အတည်ပြုမှပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆုံးဖြတ်ချက်။ သူ5ဖို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းခလုတ်ကိုဖိ, ခေါင်မိုး၏တစိတ်တပိုင်းအဖြစ်အကြီးအသမိုင်းဝင် Haydarpasa ရထားဘူတာများတွင်မီးဖြင့်ဖျက်ဆီးခံရခဲ့သည်။ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ပွနျလညျထူထောငျအတှကျအလုပျလုပျဖို့စတင်တာဖြစ်ပါတယ်။ လိုင်း၏သက်တမ်းတိုးပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အရွယ်ရောက်ရက်စွဲများရထားလမ်းမှထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်ပြီးနောက်နေ့စွဲဘူတာရုံတစ်ဦးသင့်လျော်သောတကယ်တော့အဖြစ်ပွနျလညျထူထောငျရလိမျ့မညျ။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအလုပ်Kadıköyမြူနီစီပယ်ကနေ Haydarpasa ရထားဘူတာအတည်ပြုမည်ဟုမျှော်လင့်နေသည် ...
ထိုအခါHaydarpaşaမီးရထားဘူတာ Sirkeci ဘူတာကနေကွယ်ပျောက်။ 16 / 02 / 2012 တူရကီရုံလွမ်းဆွတ်ရည်ရွယ်ချက်များန်ဆောင်မှုများန်ကြီး Yildirim ပေးရ Sirkeci မီးရထားဘူတာနှင့်အတူ Haydarpasa xnumx't အကြားအစ္စတန်ဘူလ်နှင့်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားစီမံကိန်းပြီးစီး, အစ္စတန်ဘူလ်တွင်နေထိုင်သူများကြောင်း 2013 ဘီလီယံကော်လာကနေရွှေ့ဖို့ကိုသူတို့လောင်စာဆီနှင့်အချိန်ဖြုန်းလိုက်တဲ့အခါ, တကတံတားတစ်ခုကိုပို့ဆောင်ရေး, သင်္ဘောများနှင့်တစ်နှစ်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ကြေညာလိုက်ပါတယ် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး Binali Yıldırımတစ်ဦးပြည့်စုံချက်တင်စေပြီ။ အဆိုပါဝန်ကြီးတူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထား 3,5 မတိုင်မီဝန်ဆောင်မှုထဲသို့သွင်းထားလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။ Binali Yildirim, ကလုံးဝအသွားအလာပိတ်ထားသည့် Bosphorus တံတား၏ဟုကြေညာခဲ့သည်။ ဝန်ကြီးဖို့တစ်နှစ်အသွားအလာအတွက်သုံးစွဲအစ္စတန်ဘူလ်နှင့်အချိန်လောင်စာ Bosphorus တံတားအသစ်ကရထားကိုဖန်ဆင်းနိုင်ကရှင်းပြခဲ့သည် ...
Haydarpaşaကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်, အHaydarpaşaရထားဘူတာလှုပ်ရှားမှုတပ်ဦး၏ xnumx.hafta ခဲ့သည် 02 / 10 / 2017 12 နှစ်ပေါင်း Haydarpasa Garda action ကို 300 အဆုံးသတ်ပြီးနောက်တနင်္ဂနွေစတင်ရထား၏Haydarpaşaကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်အကြမ်းဖျင်းဆန့်ကျင်ရုန်းကန်လိုချင်သောပြောင်းလဲခြင်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ 01.10.2017 မှ 13.00 14.00 အပေါ် Haydarpasa ရထားဘူတာမှာယနေ့နာရီအကြားခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာ binding ဖျော်ဖြေ action ကို "Haydarpasa ငါ၏အပည့" BTS ဌာနချုပ်ဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင် Ahmet Eroglu "အို Railwaymen ရဲ့အသံကိုဒေတာခရီးသည်များ" စဉ်အတွင်း Levent စက်လုပ်ငန်းရှင်များရေးစပ်သီကုံးသည်။ အဆိုပါHaydarpaşaကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် Choir "အိုး, ဒီပဲ" ဟုသူကအဆိုပါHaydarpaşaပေါ်ဂီတကိုရေးစပ်သီခငျြးမြားစရာဘို့ကျမ်းစာ၌ရေးထားသီချင်းစာသား။ ကူးတို့အပေါ်အဝင်ခရီးသည်လက်ခုပ်သံနှင့်အတူအရေးယူဆောင်ရွက်မှုမှပံ့ပိုးကူညီမှုကိုပေး၏။ လင်းယုန်တပ်မဟာများကကျင်းပခဲ့သည့်ဖြစ်ရပ်စဉ်အတွင်း ...
Haydarpasa မီးရထားဘူတာပေါ့ဆမီးအောက်မှာတို့သည် လာ. | Haydarpasa ရထားဘူတာ
အနောက်ဘက်တစ်မြေမြန်နှုန်းရထားဘူတာကျန်ရှိသော၏ Alanya စည်ပင်သာယာသုသာန်ထဲမှာချထားပါ။
Darica အတွက်မြေယာများရောင်းချမှုကနေ TCDD
Haydarpasa ရထားဘူတာနှင့်ရောင်းချဖို့ Bosphorus Naz အများအပြားအများပြည်သူအဆောက်အဦးများ
အဆိုပါ Haydarpasa ရထားဘူတာများရောင်းချမှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံအာရုံကိုဆွဲယူ
ဝန်ကြီး Simsek Haydarpasa ရထားဘူတာအဆောက်အဦကရောင်းဖို့မဟုတ်ပါ